Taariikhda My Butros » 4 Sababaha Profile Photo A wanaajin doonaa Search For Love
Last updated: Jan. 13 2021 | < 1
Dareenkaa u horeeyaana Muhiim ah
Waan ognahay in aad looma jeedo in la, laakiin aynu ku jirno dhamaan dambi ah “judging a book by its cover,” gaar ahaan marka ay timaado raadinta ciyaar! Hubi in aad profile sawir oo muujinaya doondoonaysaan aad fiican.
Dadka jecel inay arkaan qofka ay ka hadlayaan Si
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay shakhsiyadda ugu cajiib ah laakiin helitaanka qof in ay ku dhacaan in jacaylka aad la hor inta aysan la laheyn mariska ah ma aha qof sahlan oo ka mid ah hawlaha. Si kastaba ha ahaatee asal aad fariin ugu horeeya waa, tahay u badan tahay in jawaab celin ay hadii ay soo arkay oo marka hore ku qoray.
Fursad ka badan inuu Heley
Marka baadi website ka, ugu gudbi doonaa iyada oo photos xubnaha ee ku aaddan in ay search, raadinayso mid ah in uu ku dhaco cudurkani ay isha. Haddii aan sawir, aad ku dhowaad Yeedha taariikhaha yaabo in aad u gudbin by.
Waxaad u sheegi kartaa wax badan oo ku saabsan qof iyo haddii ay tahay sax kugu ah ka sawir, si isticmaali Hordhacan ay kuugu faa'iidayn. Why not add more than one? Photos of you in different scenarios, waxyaabo aad jeceshihiin wax weynayn haasaawe bilaabayaashan…
Sidaas, waxa aad sugeyso? Hadda Saxiix
Maxaad Bees Ragga Love aan waxgarashada lahayn Queen
Afar Common dhibaatooyinka xiriirka
5 Waxyaabaha ay tahay inaad ku dhahdaa isaga Xusuusi uu Waxaad u baahan yahay
10 Date ka dhisan Talooyin First ee Ragga